လေဖြတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့ငှက်ပျောသီး စားကြပါစို့ …. – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
လေဖြတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့ငှက်ပျောသီး စားကြပါစို့ ….
ပိုတက်စီယမ် များစွာပါဝင်တဲ့ သစ်သီးတွေဟာ သွေးဖိအားကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ သွေဖိအား မြင့်မားတာ (သွေးတိုးတာ) ဟာ လေဖြတ်ဖို့ အဓိက အချက်ကြီးပါ။ ပိုတက်စီယမ်များစွာ ပါဝင်တဲ့ အစာ စားသူတွေဟာ လေဖြတ်နိုင်ခြေ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်း လာပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးများများစားပြီး အာလူးကြော်လိုမျိုး ကြွပ်ရွတဲ့ အစာတွေကို ရှောင်ရှားတာကြောင့် လေဖြတ်တာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။
ပိုတက်စီယမ် မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့ သစ်သီးတွေဟာ ကြွပ်ကြွတဲ့ အဆာပြေအစာတွေကို ရှောင်တာကြောင့် ဆားရရှိမှု နည်းသလိုမျိုး သွေးဖိအားကို ကျဆင်းစေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခင်က လေ့လာမှုတွေအရ အသက်ကြီး သူတွေအနေနဲ့ ပိုတက်စီယမ် မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့ အစာစားရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျောက်ကပ်ဟာ ပိုလျှံနေတဲ့ သွေးတွင်းက ပိုတက်စီယမ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း လျော့နည်းနေတာကြောင့် ဆိုပါတယ်။
ယခုလေ့လာမှုအရ ပိုတက်စီယမ်ဟာ ကျောက်ကပ် လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ တွေ့ရှိထား ပါ တယ်။
ပိုတက်စီယမ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်တဲ့အသီးတွေထဲမှာ ငှက်ပျော်သီးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးမှာ ပိုတက်စီယမ် ၄၂၀ မီလီဂရမ်ပါဝင်ပြီး လူကြီးတစ်ယောက်အတွက် နေ့စဉ်ပိုတက်စီယမ် လိုအပ်ချက်ပမာဏ ၃၅၀၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
လေးပတ်တာလောက် ဆားလျှော့စားတာကြောင့် သွေးဖိအားကျဆင်းပြီး လေဖြတ်တာနဲ့ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြေ လျော့ကျသွားတယ်လို့ လေ့လာမှုအရလည်း တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဆားလျှော့စားပြီး ငှက်ပျော်သီးနဲ့ ဟင်းနုနယ် ရွက်လို ပိုတက်စီယမ် မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့ အစာစားတာကြောင့် သွေးဖိအား ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး လေဖြတ်တာ မဖြစ် အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
← ဝက်သက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်သိသင့်တဲ့ အချက် (၆) ချက်
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် ဥရောပသီချင်း ဗီဒီယိုဆုပေးပွဲအား ဂီတဗဟိုအချက်အချာ လန်ဒန်မြို့တွင် ကျင်းပမည် →
ရှောက်သီးနဲ့ ပျားရည် ဆေးနည်းက အကောင်းဆုံး ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးဖြစ်
January 3, 2017 USDP 2016 Comments Off on ရှောက်သီးနဲ့ ပျားရည် ဆေးနည်းက အကောင်းဆုံး ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးဖြစ်
September 22, 2017 USDP 2016 Comments Off on နာနတ်သီး အခွံတွေ လွှင့်မပစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း